अटो « Clickmandu
बीएस-६ सुजुकी एक्सेस १२५ स्कुटर नेपाली बजारमा
काठमाडौं । सुजुकी मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नेपालका लागि आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिले बीएस ६ प्रविधिको सुजुकी एक्सेस स्कुटर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । निषेधाज्ञाकै समयमा नेपाल प्रवेश
यी हुन् नेपालमा उपलब्ध ३० लाखभन्दा सस्ता कार
काठमाडौं । चिटिक्क परेको घर र एउटा कार चढ्ने धेरैको सपना हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालमा बिक्री हुने कारको मूल्य ३ गुणासम्म महँगो पर्ने भएकाले धेरै नेपालीको सपना
रोयल एनफिल्ड नेपालमा, शुरुवाती मूल्य ६ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । रोयल इन्फिल्डको क्रुजर सिरिजको नयाँ मोडेल मेटेओर ३५० सीसी नेपालमा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता एमभी दुगड ग्रुपपअन्तर्गतका विवेक अटोमोबाइल्स नयाँ मोडेल मेटेओर
फोटन गाडी खरिद गर्नेलाई महालक्ष्मी विकास बैंकले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र एमएडब्ल्यू वृद्धिबीच सम्झौता भएको छ । कमर्सियल भेहिकल्स खरिद गर्न चाहने ग्राहकहरुलाई सरल तथा सुलभ तरिकाबाट कर्जा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंक र एमएडब्ल्यूबीच
स्कोडा कुशाकको बिक्री शुरु, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । नेपालका लागि स्कोडाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले स्कोडाको एसयुभी स्कोडा कुशाकको बिक्री शुरु गरेको छ । शुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको नयाँ कुशाकको टेस्ट
टीभीएसको मोटरसाइकल र स्कुटरको नयाँ मूल्य सार्वजनिक, कुनको कति ?
काठमाडौं । टीभीएस मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नयाँ मूल्य सार्वजनिक भएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले टीभीएस मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड तथा ईरिक्साको अधिकतम मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको हो ।
टाटा नेक्सन ईभी नेपालमा, शुरुवाती मूल्य ३५ लाख ९९ हजार
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको बहुप्रतिक्षित नयाँ टाटा नेक्सन ईभीको विक्री वितरण शुरु भएको छ । नेपालका लागि टाटाको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले साउन १२ गते (मंगलबार) टाटा नेक्सन ईभी
नाडाद्वारा स्थास्थ्य राज्यमन्त्रीसँग खोप माग
काठमाडौं । नाडाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग अटोमोबाइल क्षेत्रमा संलग्नलाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको ७ सदसिय नाडा प्रतिनिधि
चार महिनामा १० हजार यूनिट नयाँ टाटा सवारी रोलआउट
एजेन्सी । भारती कार निर्माता कम्पनी टाटा मोटर्सले सन् २०२१ फेब्रुअरी २२ मा नयाँ जेनेरेसन टाटा सवारी सार्वजनिक गरेको थियो । कम्पनीको अनुसार यस ६÷७ सिटर एसयूभी १० हजार यूनिट
काठमाडौं । नेपालका लागि हिरो मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक बिक्रेता एनजीएम ट्रेडिङले नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । हिरोले ८ वटा मोटरसाइकल र ५ वटा स्कुटरको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको
कसरी उठ्ला नाकाबन्दीको मारमा परेको इरानको अर्थतन्त्र ?
एजेन्सी । लामो समयदेखि अमेरिकाको आर्थिक नाकाबन्दीमा परेको इरानले अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्रमुख जोड दिने भएको
नेप्सेका सीइओ साउदको अनैतिक धन्धा: आफ्नै नाममा लिलामीको सेयर भरेको भेटियो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का सीइओ चन्द्रसिंह साउदले बिक्री नभएको हकप्रद सेयरको लिलामीमा सहभागी
जागिर जोगाउन सेबोन अध्यक्ष ढुंगाना तीब्र ‘राजनीतिक लविइङ’मा
काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा उखान लोकप्रिय छ । त्यो हो- ‘कसलाई के को धन्दा,